Wave Soldering Machine က ဘာအလုပ်လုပ်သလဲ | နီယိုဒင်
Wave Soldering Machine က ဘာအလုပ်လုပ်သလဲ
ငါ။ လှိုင်းဂဟေစက် အမျိုးအစားများ
Microcomputer ဒီဇိုင်းကို သိပ္ပံနည်းကျ သုတေသနဌာနများ၊ ကျောင်းများနှင့် အခြား R&D ဌာနများသို့ အဓိကထားအသုံးပြုသည်၊ ထုတ်လုပ်မှု၏ နယ်ပယ်အလိုက် လိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင် အသေးစားအသုတ်အမျိုးမျိုး၊ miniaturized ထုတ်ကုန်အသစ် အစမ်းထုတ်လုပ်ခြင်း၊ ပုံသေအော်ပရေတာများ မလိုအပ်ပါ။
အင်္ဂါရပ်များ: လှိုင်းအကျယ်သည် အများအားဖြင့် 200mm ထက်မပိုပါ၊ အဖြည့်ခံသတ္တုတိုင်ကီပမာဏသည် 50KG ထက်မပိုပါ၊ သေးငယ်ပြီး လက်ရာမြောက်သောခြေရာ၊ သေးငယ်သောခြေရာ၊ ကိုင်တွယ်ရလွယ်ကူသည်၊ လည်ပတ်ရလွယ်ကူသည်၊ ဖော်ရွေသော လူ-စက်မျက်နှာပြင်၊ အမှားခံနိုင်ရည်ရှိသည်။
အသေးစား လှိုင်းဂဟေဆော်ခြင်း၏ အသုံးချနယ်ပယ်မှာ အလတ်စားနှင့် အသေးစား အသုတ်ထုတ်လုပ်မှု ယူနစ်များနှင့် သိပ္ပံနည်းကျ သုတေသနဌာနများ ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် ယေဘူယျအားဖြင့် မျဉ်းဖြောင့်သွယ်တန်းခြင်းမုဒ်ကို လက်ခံသည်၊ မြင့်မားသောထိရောက်မှု၊ လှိုင်းအကျယ်သည် များသောအားဖြင့် 300mm ထက်နည်းသည်၊ ဂဟေဂယက်သည် အလယ်အလတ်စွမ်းရည်ရှိပြီး၊ လည်ပတ်မှုစနစ်သည် မိုက်ခရိုကွန်ပြူတာထက် ပိုမိုရှုပ်ထွေးသည်၊ ပုံသဏ္ဍာန်သည် မိုက်ခရိုကွန်ပြူတာထက်လည်း ပိုကြီးသည်၊ ဒက်စတော့ဖြင့် လုပ်နိုင်သည်၊ floor type ဖြစ်ရမည်။ အသုံးပြုသူအသုံးပြုမှုအမြင်အရ၊ သိပ္ပံသုတေသနဌာနအများစုသည် မိုက်ခရိုကွန်ပျူတာကို အစားထိုးရန်အတွက် ဤစက်အမျိုးအစားကို ရွေးချယ်ရန် ဆန္ဒရှိကြပြီး အပလီကေးရှင်းအကွာအဝေးရှိ ပိုကြီးသောရွေးချယ်မှုနေရာရရှိရန် ဆန္ဒရှိကြသည်။
3. အလတ်စား လှိုင်းဂဟေစက်
အလတ်စား လှိုင်းဂဟေစက်ကို အလတ်စားနှင့် အကြီးစား-ထုထည် ထုတ်လုပ်မှု ယူနစ်များနှင့် လုပ်ငန်းများတွင် အသုံးချသည်။
အင်္ဂါရပ်များ: မော်ဒယ်သည် ကြီးမားသည်၊ အလုံးစုံ အပြင်အဆင်သည် အစိုးရအဖွဲ့ဖွဲ့စည်းပုံဖြစ်ပြီး၊ များသောအားဖြင့် လှိုင်းအကျယ်မှာ 300mm ထက်ပိုသည်၊ ဂဟေဆော်နိုင်သော ပမာဏသည် 200kg (single wave machine) သို့မဟုတ် 250kg (double wave machine)၊ 00kqg အထိ အကြီးဆုံးဖြစ်သည်။ ဖရိမ်အမျိုးအစား သို့မဟုတ် claw အမျိုးအစား ဖြောင့်တန်းမျဉ်းကုပ်ခြင်းမုဒ်ကို လက်ခံပါ၊ လုပ်ဆောင်ချက်က ပိုပြည့်စုံသည်၊ ကုပ်တွယ်မှုအမြန်နှုန်းသည် မြန်ဆန်သည်၊ လုပ်ဆောင်ချက်ထိရောက်မှု မြင့်မားသည်၊ အသုံးပြုသူရွေးချယ်ရန် ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ များစွာရှိသည်၊ ရှေ့နှင့်နောက်လိုင်း ကိုယ်ထည်သည် လိုက်ဖက်ကောင်းမွန်သည်။
Mainframes များသည် အဆင့်မြင့်အသုံးပြုသူများ၏ လိုအပ်ချက်များအတွက် အဓိကအားဖြင့် ဒီဇိုင်းထုတ်ထားပါသည်။ ၎င်း၏ အဓိက ဒီဇိုင်းအင်္ဂါရပ်များမှာ ခေတ်မီသိပ္ပံနည်းကျ နည်းပညာဆိုင်ရာ နည်းလမ်းများနှင့် နောက်ဆုံးပေါ် အောင်မြင်မှုများ၏ လှိုင်းဂဟေနည်းပညာကို အပြည့်အဝအသုံးပြုခြင်း၊ ပြီးပြည့်စုံသော လုပ်ဆောင်ချက်ကို လိုက်စားခြင်း၊ အဆင့်မြင့် စွမ်းဆောင်ရည်၊ အသိဉာဏ်ဖြင့် ထိန်းချုပ်ခြင်းနှင့် စနစ်ခေတ်မီခြင်း တို့ဖြစ်သည်။ ထိုကဲ့သို့သောကိရိယာများသည်စျေးကြီးသည်၊ ရှုပ်ထွေးသောထိန်းသိမ်းမှု၊ ကောင်းမွန်သောဂဟေအရည်အသွေး၊ မြင့်မားသောစွမ်းဆောင်ရည်နှင့်ကြီးမားသောစွမ်းရည်ဖြစ်သောကြောင့်၎င်းသည်အစုလိုက်အပြုံလိုက်ထုတ်လုပ်မှုအတွက်သင့်လျော်သည်။
ND 250 လှိုင်းဂဟေစက်
II Wave Soldering Machine ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းခြင်း။
လှိုင်းဂဟေ ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှု အကြောင်းအရာ ၄ နာရီတိုင်း-
1. လှိုင်းနှစ်ခုကြားရှိ ခဲမဖြူကို သန့်စင်ပါ။
2. အရက်ထဲတွင်နှစ်ပြီးလက်ဖြီးနှင့်အတူ rosin nozzle ဖြီးသန့်ရှင်းပါလိမ့်မယ်;
မှတ်ချက်- ဤအဆင့်ကို လုပ်ဆောင်သောအခါ၊ ကွင်းဆက်အတွင်းရှိ PCB ကို ကူးစက်နေကြောင်း သေချာပါစေ။
1. သံဖြူရေကန်အတွင်းရှိ အကြွင်းအကျန်များကို သန့်စင်ရန်၊ သံဖြူမျက်နှာပြင်ပေါ်ရှိ သံဖြူအကြွင်းအကျန်အားလုံးကို စုဆောင်းရန် သံဖြူဇွန်းကို အသုံးပြုကာ သံဖြူအကြွင်းအကျန်များကို ကွဲသွားစေရန် အမှုန့်ထည့်ပါ။ အထက်ဖော်ပြပါ အဆင့်များ ပြီးပါက သံဖြူမီးဖိုကို နေရာပြန်ချထားပါ။
2. အကာအကွယ်ဖန်ခွက်အတွင်းနှင့် အပြင်ကို သန့်ရှင်းစေရန် ဖန်ရေတွင် နှစ်ပြီး အဝတ်စဖြင့် အုပ်ပါ။
3. အရက်ကို လက်ဖြင့်ဖြီးနှစ်ပြီး ခြေသည်းပေါ်ရှိ အညစ်အကြေးများကို သန့်စင်စေကာ ဝါးချောင်းဖြင့် ခြေသည်းအတွင်း ဝှက်ထားမည်ဖြစ်ပြီး အညစ်အကြေးများကြားတွင် အမည်းရောင်ကို သန့်စင်ပေးပါ။
4. မှုတ်ထုတ်ခန်းအတွင်းမှ ဇကာမျက်နှာပြင်ကို ဖယ်ရှားပြီး ၎င်းကို အရက်သေစာဖြင့် သန့်စင်ပါ။